NgoMgqibelo, Novemba 25, 2017 NgeSonto, Novemba 26, 2017 U-Adam Encane
Ngisamangazwe kakhulu inani lamasayithi angakabukeki kuselula - kufaka phakathi abamemezeli abakhulu kakhulu. Ucwaningo lwe-Google lukhombisile ukuthi abantu abangu-50% bazoshiya iwebhusayithi uma ingeyona eyamaselula. Akusilo nje ithuba lokuthola abafundi abengeziwe, ukwenza ngokwezifiso isayithi lakho ukuze lisetshenziswe ngeselula kungathuthukisa ulwazi lwakho lomsebenzisi njengoba wazi ukuthi abantu bahamba manje! Ngokuhlukahluka okukhulu kwe-
Iwashi liyakhathaza, kepha akukephuzi kakhulu kubahlinzeki be-e-commerce ukwenza amasayithi abo ukushayela ukuguqulwa okuningi. Le infographic evela kochwepheshe bokwenza ukuguqulwa kokuhle ibeka izeluleko eziyi-17 zokwenza kahle okufanele ngabe uzisebenzise ngokushesha uma unethemba lokuzuza kumthamo wokuthengwa kwamaholide kule sizini. Kunamasu amathathu ayisihluthulelo okufanele ngaso sonke isikhathi uwasebenzise okufakazelwa ukuthi uhlala ushayela ukuguqulwa okwengeziwe ngeholide
Ngabe uke wasesha iwebhusayithi yakho ku-Google futhi wabona umaki olungele uMakhalekhukhwini kuyo? I-Google inekhasi lokuhlola elisebenziseka kalula lapho ungabheka izingqinamba ngesayithi lakho. Uhlolo oluhle oluhlaziya izinto futhi luqinisekise ukuthi zihlukaniswe kahle futhi ziyabonakala. Iselula-enobungani ayilungiselelwe iselula, noma kunjalo. Kumane nje kuyisisekelo futhi akubheki ukusebenza kwangempela komsebenzisi kwabasebenzisi beselula ku-
NgoLwesibili, Septhemba 1, 2015 NgoLwesibili, Septhemba 1, 2015 Douglas Karr
Ubunikazi be-Smartphone abugcini nje ngokwanda, kubantu abaningi izindlela zabo zonke zokuxhuma kwi-Intanethi. Lokho kuxhumana kuyithuba lezindawo ze-e-commerce nezitolo ezidayiswayo, kepha kuphela uma ulwazi lweselula lwesivakashi sakho lungaphezu kwalabo oncintisana nabo. Emhlabeni jikelele, abantu abaningi ngokwengeziwe benza ukugxumela kubunikazi be-smartphone. Funda ukuthi lokhu kuthuthela kumakhalekhukhwini kulithinta kanjani ikusasa le-e-commerce kanye nemboni yezokuthengisa isiyonke.
Uma Ubudinga Obunye Ubufakazi Obengeziwe Bokuthinteka Kwamaselula Kwibhizinisi
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 12, i-2014 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 12, i-2014 Douglas Karr
Sidlule esigabeni sobuchwepheshe lapho amawebhusayithi abonwa khona njengesango elihle phakathi kwekhasimende nebhizinisi. Izinkundla zabasebenzisi, ama-FAQ, amadeski osizo ne-imeyili kusetshenziselwe ukubekwa kwezikhungo zezingcingo ezibizayo nesikhathi esihambisanayo abasithathile ukuxazulula izingqinamba zamakhasimende. Kepha abathengi namabhizinisi ngokufanayo bayazenqaba izinkampani ezivele zingalubambi ucingo. Futhi iwebhu yethu ephathekayo, uhlelo lokusebenza lweselula nomhlaba wefoni ephathekayo manje sekudinga lokho